SOC TRANG - Cochinchina - Ny Tany Masin'i Vietnam Studies
Ny faritany dia ao anatin'ny lemaka lehibe izay miorina amin'ny Cochin-China ambany. Fonja sarotra ny tany, ny tany avo indrindra dia saika tsy mirefy 2 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina. Etsy an-danin'izany, mbola misy hantsana be dia be, indrindra ao ambadiky ny lemon-dranomasina manamorona ny Ranomasina Atsinanana, sy any andrefana, any amin'ny sisin-tanin'i Rachgia [Rạch Giá] sy Cantho [Cần Thơ], izay ambanin'ny haavon'ny ranomasina. Mandritra ny fotoanan'ny orana dia difotry ny rano ny distrika foibe. Soa ihany, ity monotony fanamiana ity dia tapaka eto ary misy ny «écran» vera namboarin'ny zava-maniry naniry teo amin'ny giong, lemon-dranomasina pasika efa natsangana teo ambonin'ireo lemaka manodidina, rakotra hazo lehibe sy volotsangana. Ireo goavambe ireo dia ampiasaina ho an'ny fonenana. Ny tany dia voasarona. Misy na aiza na aiza sosona Argil (tanimanga) mifangaro amin'ny fasika sy ny slime rakotra tany santimetatra vitsivitsy. Eto amin'ity tany tsy miovaova ity, ny fandriana amin'ny renirano dia tena mahakivy tanteraka amin'ny tany, izay mitrandraka ny orana ary manangona amin'ny rano be; amin'ny fantsona avo dia mitobaka ireo banky izy ireo ary zezika ny tany nefa tsy misy fanampiana avy amin'ny mponina.
Ny fitondram-panjakana dia nandray an-tanana ny fampandrosoana ny lakandrano izay mivezivezy ireo faritany izay nandalovany, ka nanova ny faritry ny faritra be rano sy tsy mahasalama, faritra marshy, ho distrika mamokatra sy be mponina. Ny harena ao amin'ny faritany dia nitombo be tao anatin'ny 20 taona farany, noho ny fisian'ny asa anaty lakandrano manan-danja. Nihabe tokoa ny fifamoivoizana nanomboka tamin'ny fampandrosoana ity tamba-jotra ity. Ny lakana sy sampana izay fomba fiasa tany am-boalohany dia efa nosoloin'ny fiara mpitondra fiara. Tamin'ny taona 1920 dia nisy fiara miisa 54 tao amin'ny faritany, misy ankehitriny 112 ary mbola ampiana hatrany izany. Ankoatra ireo lalana ireo dia misy ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny faritany sy ny Saigon [Sài Gòn] sy Kambodia. Manoro hevitra aho isan-kerinandro fa misy ny serivisy "Messageries fluviales" apetraka Saigon [Sài Gòn] sy Dai Ngai [Đại Ngãi], miantso mytho [Mỹ Tho], Vinhlong [Vĩnh Long], fotsiny [Sa Đéc], Chaudoc [Châu Đốc], Longxuyen [Long Xuyên] sy Cantho [Cần Thơ]. Misy ihany koa ny serivisy fampidirana sinoa ho an'ireo mpandeha sy entana avy:
Soctrang [Sóc Trăng] mankany Rachgia [Rạch Giá];
Soctrang [Sóc Trăng] mankany Phom Penh [Pnôm Pênh], miantso Cantho [Cần Thơ] sy Chaudoc [Châu Đốc].
Ny faritany dia fehezin'ny tompon'andraikitra iray izay mifehy ny asa ara-politika sy ny fitantanana ao amin'ny faritany ary manana solombavambahoaka lefitra. Misy ny fitsarana ambaratonga faharoa izay notarihin'ny mpitsara telo, notohanan'ny Mpikambana ao amin'ny Fitsarana, ary mpitambato mpanampy roa. Misy garrison any Soctrang [Sóc Trăng], miaraka amin'ny orinasa 1st Fahatapahan'ny mpiombon'antoka Annamite. Misy mpandrindra ny fomba amam-panao sy excise miaraka amin'ireo mpanamory mpanampy roa, mpanara-maso ny lalambe ao Baixau ihany koa. Ny sekoly (oniversite fampianarana ampahibemaso) ao amin'ny tanàna lehibe dia tarihan'ny Profesora iray, izay manara-maso ireo sekoly hafa any amin'ny faritany. Ny tompon'andraikitra iray dia miandraikitra ny fitahirizam-bola. Ny faritany dia mizara ho distrika administratif 4, tantanin'ny Phus [Phủ] na Huyens [Huyện], izay solontenan'ny governora amin'ny faritany. Miisa miisa cantons sy tanàna 12. Ao amin'ny tanàna lehibe dia misy hopitaly an'ny Sisters "de la Providence de Portieux", notohanan'ny faritany ary sekoly roa (Kolejin'ny torolàlana ho an'ny daholobe), iray ho an'ny ankizilahy, ary ny iray ho an'ny zazavavy, nisokatra ny sekoly ambaratonga Element any amin'ny ankamaroan'ny vohitra. Ny fandaminana ara-pahadiovana efa misy na efa apetraka amin'ny ivon-toerana manan-danja rehetra. Ho vita tsy ho ela ny famatarana fitaovana sy fitaovana ary kojakoja ho an'ny torolalana ho an'ny daholobe sy fanampiana ara-pitsaboana.
Nitombo be ny mponina ao amin'ny faritany nandritra ny 20 taona farany. Ny fitomboana dia tsy noho ny fiterahana be loatra amin'ny fahafatesan'ny maty ihany, fa koa, noho ny fifindra-monina be loatra, noho ny fampandrosoana ara-toekarena an'ny firenena taorian'ny fananganana lakandrano. Tamin'ny 1894, ny mponina dia 57.000 38.000 ny Annamita, Kambodza 10.000, Sinoa 60, 105.000 Eropeana, ary mponina 117.000 no mponina. Amin'izao fotoana izao dia misy: 55.000 Annamites, Kambojiana 11.000, 2.500 Shinoa, XNUMX Minh Huong [Minh Hương] ary Eropeana 164, mponina miisa 185.000. Ny ankamaroan'ny Annamite dia mpahay mpiompy. Maromaro ny tompon-tany izay nahazo tany be dia be izay avelany ho an'ny tantsaha. Ny Chineses, izay miaina any Soctrang [Sóc Trăng], maro sy manankarena. Tompon-dry zareo ny lavanila, milina famatsiana ary ny ankamaroan'ny trano fandraharahana. Betsaka ny fambolena vary.
Ny faritanin'i Soctrang [Sóc Trăng] dia manana velaran-tany 238.000 ha ary ny faritra rehetra ao dia ampiasaina, ary saika eo ambany fambolena vary. Mahatratra 260.000 taonina ny taom-piotazana, izay 80.000 ares no notazonina mba hohanina eo an-toerana sy ny famafazana. 180.000 taonina ny sandany aondrana, ampahafolony amin'ny fanondranana Cochin-China. Manodidina ny mpanjana-tany frantsay am-polony eo ho eo any amin'ny faritany. Iriko amin'ireto, MM Gressier sy Labaste dia manararaotra taratasy mivalona efa ho 5.000 ha mahery (eo amin'ny 12.500 hektara).
Misy milina decortication roa, miasa amin'ny etona, iray amin'ireo an'i M. Gressier: misy eo afovoan-taniny ary mahatratra 150 taonina ny vary fotsy.
(Visited 1,894 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
Fitsidihana anio: 21
Total visits: 433,507